Ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-edebe ihe ọmụma weebụ - Webmasters Tips
Ngwaọrụ anyị ga-atụle ebe a zuru oke ma onye mmemme ma ndị ọrụ na-abụghị ọkachamara. Nke kachasị mma bụ na ha dị na ntanetị dịka freeware nke na-enyere aka ịrụ ọrụ dị iche iche nke ntanetị weebụ ma ndị ọkachamara na-atụ aro ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ntanetị ntanetị ma ọ bụ mgbatị, ị kwesịrị ịnwale ihe ndị a:
Ọ bụ usoro ihe ntanetị weebụ nke nwere ike wepụ ihe ọmụma site na listi na tebụl ma gbanwee ya na faịlụ XLS na CSV. Nke a bụ nchịkọta Chrome nke na-abịa na nza nhọrọ. Nchịkọta data dị ma na n'efu na ịkwụ ụgwọ nsụgharị. Ọ dịghị achọ ihe ọ bụla. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịwụnye Google Chrome ka ị nweta ihe kachasị ngwa ngwa a.
Nchịkọta weebụ (Chrome)
Ngwaọrụ a dị mma maka ndị na-eji Google Chrome dịka ihe nchọgharị weebụ kachasị. Nbudata weebụ dị maka nbudata ozugbo ma nye gị ohere ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ dị mfe. Naanị ị chọrọ ịmepụta saịtị ma dee ụdị data ịchọrọ ịmepụta. Mgbe ahụ, ịnwere ike ịbubata data enwetare faịlụ CSV.
Ọ bụ ihe ọzọ dị ebube ihe ntanetị weebụ na ị gaghị echefu. nwere ike wepụ ọtụtụ faịlụ dịka ịchọrọ ma hazie data n'ime usoro dị mma. Nanị ịhọrọ ịhọrọ ederede ma tinye ya na tebụl, wee pịa bọtịnụ yiri mgbaaka ma kwe ka usoro a rụọ ọrụ ya.
) Mmemme ndị na-esonụ na-eme dị ka ndị ahịa dị ike dị ntanetị:
Anya na-ahụ anya
Nke a bụ otu n'ime ndị ntanetị weebụ kachasị mma. Ihe na-ahụ ihe na-ahụ anya na-abịa site na ntanetị dị mfe na-pịa ma nwee ike iji ya nakọta nnukwu data. Ị nwere ike ịnweta data ozugbo site na ibe ma ọ bụ saịtị ma chọọ ịbupụ ya na CSV, JSON, SQL na XML faịlụ.
Ọ bụ mgbatị Firefox nke nwere ike ibudata na ụlọ ọrụ Firefox-agbakwunye. Ozugbo i mejupụtara ma rụọ ọrụ ya, usoro a ga-arụ ọrụ na ihe nchọgharị gị. E wezụga nke ahụ, o nwere njirimara njirimara data nke nwere ike ime ka ahụmahụ gị na-atọ ụtọ ma dị mfe dị ka o kwere mee. Ntọala ya dị mfe, ị nwere ike iwepụ data ị chọrọ ngwa ngwa. A na-echekwa data ndị a kpochapụrụ na JSON, RSS na XML formats Source .